४० वर्षमा चीनको फड्को - China Radio International
(GMT+08:00) 2018-12-19 15:40:26
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक पदासिन भएपछि 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' नारा अगाडि सारे। प्रधानमन्त्री ओलीको यो नारा नेपालका दुर्इ छिमेकी मुलुकका राष्ट्रनायकका नाराको नक्कल गरिएको सजिलै अन्दाज गर्न सकिन्छ। नेपालको छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सत्तामा आउनासाथ 'चिनियाँ सपना'को नारा घन्काएर चीनलार्इ पुनर्उत्थान गर्ने उद्घोष गरेको दुर्इ वर्षपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 'मेक इन इण्डिया' नारा उचाले।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्ना नारालार्इ कार्यान्वयन गर्नका लागि विविध कार्यक्रमहरु पनि अगाडि सारेका छन्। तर, ओली भने ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नुको सट्टा झिना मसिना कुरामा अल्झिएर समय बर्वाद गरिरहेका छन्। छिमेकी मित्रराष्ट्रका नाराको नक्कल गर्नुभन्दा कामको नक्कल गरे नेपाली जनता साँच्चै समृद्धिको सिँडी चढ्ने थिए। समृद्ध र सुखी हुनका लागि सफल नेतृत्व र प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ। नाराको नक्कल मात्र गर्ने होइन विकास कसरी गर्नुपर्छ र जनताप्रति कसरी उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चीनबाट सिक्नुपर्छ।
नेपालको छिमेकी मुलुक चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विकासोन्मुख मुलुक हो। चीनले गरेको प्रगति र विकासले यतिबेला विश्वलार्इ आश्चर्यचकित बनाइरहेको छ। चीनको विकास र प्रगतिको पछाडि आधुनिक चीनका प्रणेता तङ स्यावो फिङको योगदानलार्इ कदापि भुल्न सकिँदैन। चालीस वर्ष अगाडि तङले जुन गोरेटो कोरेका थिए आज चीन त्यही गोरेटोलार्इ फराकिलो सडक बनाउँदै निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ।
चीनले सुधार र खुलापन सुरु गरेको यो महिना ठ्याक्कै ४० वर्ष पार गरेको छ। यी चालीस वर्षमा चीनले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्‍यो, छोटो चर्चा गरौँ।
सन् १९७० को दसकमा चीन मूलत: दुर्इवटा समस्याबाट गुज्रिरहेको थियो। एकातिर रुसले चीनमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो भने दस वर्षे सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनलार्इ जर्जर बनाएको थियो। माओ चतुङकी कान्छी श्रीमती चियाङ छिङको नेतृत्वमा चाङ छुन छ्यावो, यावो वेनयुआन र वाङ होङवेनले चीनभरि लाल आतङ्क मच्चाएका थिए। यी चारैजना चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिका सदस्य थिए र उनीहरुलार्इ 'ग्याङ अफ फोर' भनेर चिनिन्थ्यो। उनीहरुकै जोडबलमा माओपछिका नेता तथा चिनियाँ शैन्य आयोगका उपाध्यक्षबाट तङ स्यावो फिङलार्इ हटाएर कुनै जिम्मेवारी नदिइकन नजरबन्दमा राखिएको थियो। पार्टीको स्थायी समितिदेखि सडकका भित्ताहरुसम्म तङलार्इ प्रतिक्रान्तिकारी तथा गद्दार पूँजीवादी भनेर भाम गाली गरिएको थियो। सन् १९७६ सेप्टेम्बर ९ मा माओ चतुङको मृत्यु भयो। माओको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री चाउ एनलार्इको मृत्यु भएकाले सो ठाउँमा माओले हुवा कुओफङलार्इ नियुक्त गरेका ��िए। माओको मृत्यु भएपछि हुवा नै पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुगे। माओको मृत्यु भएको २७ दिनपछि हुवाले चलाखीपूर्वक पार्टी स्थायी समितिको बैठक अक्टोबर ६ तारिख रातको ८ बजे बोलाए। सो बैठकमा 'ग्याङ अफ फोर'का चारैजनालार्इ गिरफ्तार गरियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले अक्टोबर १६ तारिख मात्र उनीहरुलार्इ गिरफ्तार गरेको औपचारिक घोषणा गर्‍यो र दस वर्षे सांस्कृतिक क्रान्तिको अवशान भयो। सांस्कृतिक क्रान्तिको अवसान भएको ९ महिनापछि सन् १९७७ जुलार्इमा मात्र तङ स्यावोफिङमाथि गरिएका सम्पूर्ण कार्वाहीहरु पार्टीले फिर्ता लियो र उनलार्इ पहिलेकै पदमा वहाली गर्‍यो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको ११ औँ केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठक सन् १९७८ डिसेम्बर १८ मा सुरु भयो। यही बैठकले खुला र सुधार नीति ल्याएको हो। खुला र सुधार नीति चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा तङ स्यावोफिङले भित्र्याएका हुन्। तङको नीतिलार्इ पार्टीले अंगिकार गरेपनि तङ कहिल्यै पनि चीनको प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपति भएनन्। माओको देहवसानपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अध्यक्ष पद हटाएर महासचिवको नेतृत्व स्थापना गर्‍यो। तङ पार्टीको महासचिव पनि भएनन्। त्यसभन्दा पहिले उनी दुर्इपटक पार्टीको महासचिव भइसकेका थिए। तङ स्यावो फिङले सबैभन्दा पहिले सनचनलार्इ आधुनिक सहर बनाउने सपना देखे। त्यतिबेला हङकङ बेलायतको अधिनमा थियो। तसर्थ उनले हङकङको ठ्याक्कै वारिपट्टि रहेको सनचनलार्इ हङकङ जस्तै विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९७९ मा 'सनचन विशेष आर्थिक क्षेत्र' घोषणा गरे। आज ४० वर्ष नपुग्दै डेढ सय वर्षदेखि विकसित हङकङकै हाराहारीमा सनचन उभिएको छ। तङको सो योगदानलार्इ कदर गर्दै चीनभरिमा सनचनमा मात्र तङ स्यावोफिङको सालिक बनाइएको छ।
बिरालो कालो होस् कि सेतो यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्ने भनाइका साथ तङले अगाडि सारेको नीतिलार्इ अहिले चीनमा 'चिनियाँ विशेषतायुक्त बजारमुखी समाजवादी अर्थतन्त्र' भनिन्छ। यसको अर्थ के हो भने कम्युनिष्ट नामले मात्र होइन कामले हुनुपर्छ। यही मियोमा घुमेको चीन आज संसारको भरभराउँदो आर्थिक शक्ति बनिसकेको छ।
डिप्लोम्याटिक पत्रिकाको एसिया प्यासिफिक अनलाइनका अनुसार सन् १९७८ मा विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको हिस्सा १ दसमलव ८ प्रतिशत मात्र थियो भने सन् २०१७ मा १८ दसमलव २ प्रतिशत पुगेको छ। यतिबेला चीनसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा ३१ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको संचिती छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनका हिसाबले अहिले चीन ११ खर्ब अमेरिकी डलरसँगै विश्वको दोस्रो ठूलो स्थानमा छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका हिसाबले चीन विश्वको तेस्रो स्थानमा आउँछ। सन् २०१७ सम्ममा चीनले एक खर्ब ७० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ।
विगत ४० वर्षमा चीनले आर्थिक विकाससँगै गरिबी निवारणमा पनि व्यापक छलाङ मारेको छ। विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९७८ मा चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या ५४ करोड २० लाख थियो। त्यतिबेला चीनको जनसंख्या ९६ करोड २५ लाख ९० हजार थियो। चालु वर्ष सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा चीनमा गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुको संख्या लगभग ३ करोड रहेको छ। यी चालीस वर्षमा गरिबीको मापदण्ड पनि परिवर्तन भएको छ भने चीनको जनसंख्या ४४ करोडले बढेको छ।
मंसिर १९ गते चीनको सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानले जारी गरेको गरिबी निवारणमा उद्योगको भूमिका शीर्षकको निलोपत्र अनुसार, विगत पाँच वर्षमा चीनमा गरिबीबाट मुक्त भएकाहरुको संख्या ६ करोड ८५ लाख ३० हजार रहेको छ। चीनमा हरेक वर्ष एक करोड व्यक्तिलार्इ गरिबीबाट मुक्त गरिँदै आएको छ। चालु वर्ष सन् २०१८ को अन्तसम्ममा चीनको वर्तमान मापदण्डमा आधारित ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी जनसंख्या ८० प्रतिशत घट्नेछ भने ६० प्रतिशत गाउँ गरिबीबाट मुक्त हुनेछन् र ५० प्रतिशत जिल्ला गरिबीबाट मुक्त हुनेछन्। सन् २०२० सम्ममा चीनले शतप्रतिशत नागरिकलार्इ गरिबीको रेखामाथि उठाउने घोषणा गरेको छ।
तङ स्यावो फिङले सुरु गरेको सुधार र खुलापनमा वर्तमान चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सपनासँगै भ्रष्टाचार निर्मलीकरणले पनि विकासलार्इ द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। विशाल भूमि र अधिक जनसंख्याको तुलनामा उल्लिखित उपलब्धिलार्इ विश्वले अपत्यारिलो र आश्चर्यजनक मानेको छ।
अब प्रश्न उठ्छ चीनका यस्ता उपलब्धिबाट नेपालले के सिक्ने ? नेपालले नारा मात्र नक्कल गर्ने की आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका व्यावहारिक कार्यक्रम पनि अगाडि सार्ने ? भौतिक विज्ञानको नियम अनुसार दुर्इवटा ठूला तातोपानीको भाँडाका बीचमा चिसोपानको गिलास राख्यो भने त्यो गिलासको पानी पनि तात्छ। दुर्इ विशाल आर्थिक शक्तिका बीचमा रहेको नेपालले छिमेकी मुलुकको विकासबाट नेपालले पनि विकास गर्ला ? जतिसुकै सफा र ठूलो घरमा बसेपनि छिमेकी गरिब र फोहोर छ भने आफ्नो पनि इज्जत रहँदैन भन्ने चिनियाँ भनाइ अनुसार चीनले यतिबेला छिमेकी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। विदेशमा गरिने सहयोग र लगानीलार्इ चीनले एकद्वारा नीति अनुसार 'बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ' (बीआरआर्इ) मार्फत अगाडि बढाएको छ।
नेपालको उत्तरतिरको १४ सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमा चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग जोडिएको छ। नेपालको विकास, समृद्धि, स्थिरता र शान्तिले चीनको तिब्बतलार्इ पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष असर पार्ने गर्छ । त्यसकारण नेपालको समृद्धि र विकासमा चीनले चासो राखिरहेको छ। नेपाल चाहिँ भ्रष्टाचार र कुशासन पालेर फोस्रा नारा मात्र लगाउन व्यस्त छ। प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तङले मुसा मार्ने बिरालो चाहियो भने जस्तै नाराको होइन कामको नक्कल गर्ने कि !
साभारः कान्तिपुर दैनिक २०७५ मंसिर २९ (२०१८ डिसेम्बर १५) शनिबार।